Baankii Internaashinaalaa Oromiyaa magaalaa Baahir Daar damee Xaanaa irra namoota hiriira bahaniin miidhaan gahuu pirezidaantiin baankichaa Obbo Tafarii Mokonnin BBCtti himan - ETHIOPIANS TODAY
Baankii Internaashinaalaa Oromiyaa magaalaa Baahir Daar damee Xaanaa irra namoota hiriira bahaniin miidhaan gahuu pirezidaantiin baankichaa Obbo Tafarii Mokonnin BBCtti himan.
Naannoo Amaaraa keessatti walitti aansuun guyyoota afuriif hirriiri ajjeechaa saba Amaaraa irra gahu mormuuf jedhame gaggeeffamaa ture.
Hiriirri kunis magaalaa Baahir Daar dabalatee magaalota naannichaa kaanittis babal’ateera.
Kamisa Ebla 22, 2021 ganama namoonni magaalaa Baahir Daaritti hiriira bahan gamoo Baankii Internaashinaalaa Oromiyaa magaaicha keessatti argamu caccabsuun meeshaalee baankichaas mancaasuu Obbo Tafariin himaniiru.
Miidhaan hojjettoota baankichaa irra gahe akka hinjirre kan himan Obbo Tafariin, qabeenyi manca’e hammam akka tahu ammatti hin shallagamne jedhan.
Dursamee eeggannoon waan godhamee tureef maallaqni baankicha keessa ture akka hin samamane gaabasan qaba jedhan.
Eegdonni baankichaa jiraatanis namoonni miidhaa kana geesisan humna isaaniin ol akka turan himaniiru.
Humni nageenyaa naannicha tures miidhaa kana oolchuu hin dandeenye kan jedhan Obbo Tafariin, kantiibaa magaalichaa waliin mari’achuun ergasii eegumsi akka taasifamaa jiru himaniiru.
Baankiin Internaashinaalaa Oromiyaa magaalaa Baahir Daar keessaa dameewwan lama kan qabu yoo tahu, kan miidhaan irra gahe damee Xaanaati jedhan pirezidaantiin Baankichaa.
Damee baankicha hafe irra miidhaan gahe akka hin jirres himaniiru. Amma abbaa qabeenyaa gamoo sanaa waliin dubbachuun yoo dafanii suphan tajaajila kennuutti deebinas jedhan.
Kantiibaan magaalichas kana booda eegumsa cimaa akka taasisaniif waadaa nuuf galaniiru jedhan Obbo Tafariin.
Baankiin Intarnaashinaalii Oromiyaa waggaa 11 dura biyyattii keessatti baankii 13ffaa ta’uun hundaa’edha.
Gidduu kana naannoo Amaaraatti hiriirri bal’aan gaggeeffame ajjeechaa saba Amaaraa irra gahe jedhan kan balaaleffatan yoo tahu, dhaadannoowan arrabsoo garaagaraa qabanis dhageesisaa turan.
Dhaadannoo qabatanii bahan keessatti ”Oromummaan haa barbadaa’u” kan jedhuufi MM Abiy dabalatee qondaalota paartii badhadhinaafi naannoo Oromiyaa bulchan kan balaaleffatan argamu.
Itoophiyaan yeroo filannoo biyyyaalessaa gaggeessuf dhiyaachaa jirtu kanatti bakka adda addaatti walitti bu’insi adda addaa uumamaa jira.
Maddi: BBC News Afaan Oromoo
ትናንት በአሶሳ ከተማ ባለቤቱ ያለታወቀ አንድ ተሣቢ መኪና የጦር መሣሪያ ተይዟል በሚል የተናፈሰው መረጃ ከእውነት የራቀ ነው፦ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን